Rasaasa News – Madax Xafiiseedyada iyo Shaqaalaha Imaamulka, oo ka Cabanaya Warxumo Tashiil.
Madax Xafiiseedyada iyo Shaqaalaha Imaamulka, oo ka Cabanaya Warxumo Tashiil.
Jijiga, June 26, 2014 – Xarunta Ismaamulka Somalida Itobiya, ayaa dhawaan waxay shaqaalaysay dhalinyaro gaadhaysa konton  ruux, kuwaas oo tababar ugu soo dhamaday Jijiga.
Shaqaalahan cusub ayaa mudo labo bilood tababar dhinaca dabagalka xogaha iyo ilaalada ah lagu siiyey xerada tababarka ciidanka ee Garab-Case, oo dhinaca koonfureed ka saaran magaalada Jijiga.
Dhalinyaradan dhamaantood waxaa lagu shaqaaleeyey xafiisyada kala duwan ee Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI].
Shaqada ay qabtaan dhalinyaradani way ka duwan tahay shaqada ay shaqaalaha xafiisyadu qabtaan. Dhalinyardani waxay gaar u yihiin madaxtooyada, iyaga oo u shaqaynaya si qarsoon uruuriyana xogaha shaqada ee shaqaalaha iyo madax xafiiseedyada.
Shaqaalahani waxay dhax joogaan xarumha xafiisyada Ismaamulka, iyaga oo aan sidan wax calaamad ah oo lagu garto. Waxay sitaan Telefoonada gacanta oo gaar ah, kuwaas oo ay si toos ah ugula hadlaan madaxwaynaha.
Sida la sheegay marar badan ayey masuuliyiin shaqada xili hor ka baxay iyo kuwa soo daahay la wargaliyey madaxwaynaha. Kuwaas oo madaxwaynuhu ku canaantay daahida iyo bixida xiliga hore.
Lama garanayo sababta keentay xiligan in la sameeyo shaqaale hoos u dabagala hawlaha masuuliyiinta xafiisyada Ismaamulka. Lakiin, arintan oo argagaxeeda leh, waxaa loo malaynayaa in laggaga hortagayo is kooxaysi abuurma doorashada horteed.
Shaqada Basaasnimada ee uu sameeyo Ismaamulka Somalida Itobiya, ayaa gashay cidhif kasta ee bulshada Somalida dibada iyo gudahaba.